Budata Rat Simulator maka Windows
Budata Rat Simulator
Budata Rat Simulator,
Enwere ike ịkọwa Simulator Rat dị ka egwuregwu lanarị nke nwere egwuregwu egwuregwu na -atọ ụtọ ma na -enye ndị egwuregwu ohere inwe ahụmịhe egwuregwu na -atọ ụtọ site na dochie oke.
Negwuregwu simulation a ị nwere ike igwu na kọmpụta gị, ebumnuche anyị dị ka oke bụ ịgbasa ụmụ nje anyị na -ebuga nebe ndị mmadụ bi na ịlanarị nri. Ma ịchọta nri abụghị naanị ihe anyị kwesịrị ime iji lanarị; nihi na ndị mmadụ na -atụ ụjọ mgbe ha hụrụ gị ka ị na -akpọ ndị otu na -ewepụ ahụhụ. Ma mgbe anyị hụrụ ndị otu na -ewepụ ahụhụ, anyị ga -agbapụ wee zoo onwe anyị.
Mgbe anyị na -achọ imepụta paradaịs oke na Rat Simulator, anyị nwere ike ịchọta oke ndị ọzọ wee tinye ha nime ndị agha anyị. Negwuregwu ebe nzuzo dị nihu, a na -enyekwa anyị ohere ịkwatu gburugburu. Anyị nwere ike ịkwatu ma kụtuo ma kụrisịa ihe ndị dị oke ọnụ ahịa dị ka efere, iko, ite. Iji soro ndị mmadụ na -alụ ọgụ, anyị nwere ike imebi nri site na iji nje anyị merụọ nri ahụ. Anyị nwekwara ike melite oke anyị ka anyị na -aga nihu na egwuregwu.
Obere usoro chọrọ maka Rat Simulator bụ ndị a:
- Onye nrụpụta AMD nwere 2.4 GHz Intel Core 2 Duo ma ọ bụ ihe dakọtara
- Nvidia GeForce 760 GTX ma ọ bụ kaadị eserese AMD Radeon HD 5870
- 3GB nke nchekwa efu
- Kaadị ụda dakọtara DirectX
Rat Simulator Ụdịdị